Non classé – Archives Nationales
Mikasa hanangana Mozea iray eto Antananarivo tsy ho ela ny Foibe Arisiva sy Tranombakoka FJKM. Nisy noho izany ny atrikasa manodidina ny tontolon’ny Mozea natao tao amin’ny SAF FJKM ny zoma 26 aprily 2019 lasa teo. Ny SAF FJKM moa dia sampan’asa momba ny fampandrosoana eo anivon’ny fiangonana FJKM eto Madagasikara.
Nitondra ny famelabelaran-kevitra ny Profesora ANDRIANAIVOARIVONY Rafolo izay sady mpampianatra-mpikaroka tantara no anthropologue (manampahaizana ambony amin’ny fandinihana ny momba olombelona sy ny fomban’olombelona).
Ny Profesora ANDRIANAIVORAVONY Rafolo
Nampitain’ny Profesora tamin’izany ny hevitry ny Mozea, ny anjara toeran’ny Mozea, ny fototra ijoroan’ny asan’ny Mozea eo amin’ny fiainam-pirenena.
Tsy mijanona ho tranombakoka ihany ny Mozea izay toerana iray mirakitra ny kanto sy ny harembakoka. Mitana toerana lehibe ao anatin’ny fanabezana ny olom-pirenena koa izy ankehitriny. Tsy very maina noho izany ny fitsidihana ny Mozea fa mitondra vokatsoa tokoa.
Vinavinaina ho hita ao amin’ny Mozean’ny FJKM ireo karazana Baiboly vita printy teto Madagasikara, ireo karazana hira protestanta hatramin’ny taloha, ireo saripika (photos) tamin’ny fotoan’andron’ireo misionera sy kristiana voalohany teto Madagasikara, ireo fanaka nampiasain’izy ireo tamin’izany, ….
Anisan’ny nanatrika izany fotoana izany ny mpiasan’ny Arisivam-Pirenena satria iray tarika ihany ny Mozea sy ny Arisiva ary ny Tranomboky.
Singa iray maneho ny satan’ny firenena ny Mozea. Maromaro ihany ireo efa mijoro eto an-toerana ary samy manana ny mampiavaka azy avy ny tsirairay. Antenaina àry fa ho faingana ny hiavian’ity vaovao kasaina hatao ity.
31 décembre 2018 Non classé
Nankalaza ny fetin’ny noely 2018 ny mpiasan’ny Primatiora teny amin’ny Lapan’i Mahazoarivo ny andron’ny Sabotsy 22 desambra lasa teo.
Niombom-pifaliana tamin’ny rehetra teny ny Praiministra, Lehiben’ny Governemanta, Atoa NTSAY Louis Christian.
Araka ny fanao mahazatra amin’ny andro krismasy dia nandray anjara mavitrika tamin’izany ireo ankizy zanaky ny mpiasa.
Nofaranana tamin’ny fifanolorana fanomezana ny fotoana.
Ny Foiben’ny Arisivam-Pirenena dia mitondra ny firarian-tsoa feno ho an’ny rehetra amin’izao asaramanitra izao.